I-Naas Archives - IntoKildare
Ama-35km kuphela ukusuka eDublin, eNaas yasemakhaya ekuvumela ukuthi ucindezeleke ngemisebenzi yezwe efana nokugibela amahhashi, igalofu nokuvakashela izindawo ezinkulu ezindala. INaas iseGrand Canal yekhulu le-18, enhle njengesithombe, futhi-ke, le ndawo icebile ngamasiko e-equine ngemigwaqo eminingi yomjaho kanye namapulazi ama-stud.
INaas, eyake yaba idolobha lezimakethe elibiyelwe ngodonga, idolobha lesifunda iKildare. Le ndawo icebile ngamasiko e-equine ngezinkundla ezimbili zemijaho - iPunchestown, ikhaya lomjaho we-Irish jump kanye neNaas, ezigaba zombili umjaho oyisicaba nokuzingela; Ukuthengiswa kweGoffs Bloodstock kanye namapulazi amaningi ama-stud.
Jabulela ukuhamba ngesikebhe ngokungcebeleka ugudle i-Grand Canal ngohambo olusuka eSallins, nambitha ukunambitheka kwezindawo zokudlela eziningi kanye nama-gastro-pubs agcwele yonke indawo noma abashisekeli bezimoto, thola konke uMondello okufanele akunikeze.
I-Pub yase-Ireland endala ejwayelekile equkethe inqwaba yezinto zasendulo nezinye izinto eziyibhilikhi ezinamaseshini omculo abukhoma wendabuko.